पेप्टो-बिस्मोल बनाम टम्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट मनोरञ्जन घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र खेलहरु
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> पेप्टो-बिस्मोल बनाम टम्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
पेप्टो-बिस्मोल बनाम टम्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
चाहे तपाईंले हल्का अपच अनुभव गर्नुभयो वा कहिले काँही ईर्ष्या , तपाई सायद पेप्टो-बिस्मोल र टम्सको कुनै पानामा आउनुभएको छ। यी औषधिहरू ईर्ष्याको लागि दुई धेरै सबैभन्दा बढी ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधि हुन्।
दुबै पेप्टो-बिस्मोल र टम्सको एन्ट्यासिड प्रभावहरू छन्, जसले पेट एसिडलाई बेअसर गर्न मद्दत गर्दछ। धेरै मसलादार खानाहरू पछि पेटको एसिड वा ठुलो खाना कहिलेकाँही छाती र पेटको माथिल्लो क्षेत्रमा जलन वा अस्वस्थता हुन सक्छ। एन्टासिडले यी लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
पेप्टो-बिस्मोल र टम्स बीचका मुख्य भिन्नताहरू के हुन्?
Pepto-Bismol बिस्मथ सबसिलिसलेटको ब्रान्ड नाम हो। बिस्मथको केही पखाला हुने ब्याक्टेरियाको विरूद्ध एन्टिमाइक्रोबियल प्रभावहरू हुन्छन् जबकि सबसालिसलेटले तरल पदार्थ र इलेक्ट्रोलाइट घाटा बिरूद्ध एन्टिसेक्रेटरी प्रभावहरू पुर्‍याउँछ। बिस्मथ सबसिलिसलेटले पेट र आन्द्रा परतमा एन्टी-भड़काउने कार्यहरू पनि गर्दछ। यी कारणहरूको लागि, पेप्टो-बिस्मोल एक एन्ट्यासिड वा एन्टिडाइरियल एजेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Pepto-Bismol विशेष गरी मौखिक तरलको रूपमा फेला पर्दछ। यद्यपि यो नियमित ट्याब्लेट र चवेबल ट्याब्लेटहरूमा पनि आउँदछ। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि, जबकि पेप्टो-बिस्मोलको प्राय जसो प्रकारहरूमा बिस्मथ सबसिलिसलेट हुन्छ, बालबालिकाको पेप्टो-बिस्मोलमा प्राय: क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ।
टम्स क्याल्शियम कार्बोनेटको लागि एक ब्रान्ड नाम हो। यो एक शक्तिशाली एन्टासिड मानिन्छ जुन पेटको एसिडलाई प्रत्यक्ष रूपमा बेअसर गर्दछ। क्याल्शियम कार्बोनेटले पेटको एसिडको साथ क्याल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइअक्साइड र पानी बनाउँदछ। पेटमा अत्यधिक कार्बन डाइअक्साइड उत्पादनको कारण, पेट र पेट (पेट फूलना) Tums को सामान्य दुष्प्रभाव हो।
पेप्टो-बिस्मोल विपरीत, टम्स मुख्यतया नियमित-शक्ति र अतिरिक्त-शक्ति रूपहरूमा एक चबाने ट्याब्लेटको रूपमा पाइन्छ। टमहरू सामान्यतया ती भन्दा बढि उमेर १२ बर्ष भन्दा पुरानो द्वारा प्रयोग गरिन्छ, तर बच्चाहरूको संस्करण टम्सको पनि उपलब्ध छ। बच्चाको टम्सका केही संस्करणहरू समावेश गर्दछ simethicone ग्यास कम गर्न मद्दत गर्न।
सम्बन्धित: पेप्टो-बिस्मोल विवरणहरू बच्चाहरूको पेप्टो-बिस्मोल विवरणहरू टम्स विवरण
Pepto-Bismol र Tums बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एन्ट्यासिड
Antidiarrheal एजेंट एन्ट्यासिड
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्रान्ड र जेनेरिक संस्करणहरू उपलब्ध छन् ब्रान्ड र जेनेरिक संस्करणहरू उपलब्ध छन्
जेनेरिक नाम के हो? बिस्मथ सबसिलिसलेट क्याल्सियम कार्बोनेट
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक निलम्बन तरल
मौखिक चेवाबल ट्याब्लेट मौखिक चेवाबल ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? २ टेबिलस्पून तरल वा २ ट्याब्लेटहरू २2२ मिग्रिहरू (कुल खुराक 52२4 मिलीग्रामको लागि) प्रत्येक to० देखि 60० मिनेट जति आवश्यक हुन्छ। प्रति दिन अधिकतम do खुराक। २ देखि che च्युवेबल 5050० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू लक्षणहरूको लागि आवश्यक पर्दछ। एक दिनमा १० ट्याब्लेट अधिकतम।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? कहिले काँही छोटो अवधि को उपयोग को लागी। आत्म-उपचार लगातार १ of दिन भन्दा बढि प्रयोग गर्नु हुँदैन। कहिले काँही छोटो अवधि को उपयोग को लागी। आत्म-उपचार लगातार १ of दिन भन्दा बढि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्क र १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु
Pepto-Bismol मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
पेप्टो-बिस्मोल मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
उच्च रक्तचाप को लागी उत्तम घरेलु उपचार
Pepto-Bismol र Tums द्वारा उपचारित अवस्था
पेप्टो-बिस्मोल एफडीएलाई ईर्ष्याको उपचारको लागि स्वीकृत गरिएको छ, एक पाचन समस्या जुन एसिड रिफ्लक्स र जीईआरडी (गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग) को लक्षण पनि हुन सक्छ। पेप्टो-बिस्मोलले एसिड अपचको उपचार गर्न सक्छ, जसमा पेटको अस्वस्थता, ब्लोटिंग र मतली जस्ता लक्षणहरू सामेल छन्। थप रूपमा, पेप्टो-बिस्मोलले उपचार गर्न सक्दछ यात्रीको पखाला र कहिलेकाँही पखाला, साथ-साथ पेप्टिक अल्सर रोगबाट हुने हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी । को लागी जब एच pylori , बिस्मथ सबसिलिसलेट संक्रमणको उपचार गर्नको लागि अन्य एन्टिबायोटिकसँग लिन्छ।
टम्सलाई ईर्ष्या र अपचको उपचार गर्न लेबल लगाईन्छ। यसले पेटमा एसिडको मात्रालाई उदासीन र कम गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै ब्लाइटिंग र पेटको अस्वस्थता जस्ता लक्षणहरूलाई कम गर्न। अपचसँग सम्बन्धित ग्यास र पेट फूलनाको लक्षणहरू कम गर्न कहिलेकाँही क्याल्शियम कार्बोनेट सिमेथिकोनसँग मिल्दछ।
किनकि पेप्टो-बिस्मोलले कहिलेकाँही क्याल्शियम कार्बोनेट समावेश गर्दछ — टम्समा समान घटक-यो प्याकेज लेबलिंग जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ र तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि तपाईं सही उत्पादन पाउँदै हुनुहुन्छ।
सर्त पेप्टो-बिस्मोल टम्स
अपच हो हो
पखाला हो हैन
Pepto-Bismol वा Tums अधिक प्रभावी छ?
हाल, पेप्टो-बिस्मोल र टम्सलाई तुलना गर्ने कुनै समिक्षा समिक्षा छैन। अध्ययन देखाइएको छ कि बिस्मथ सबसिलिसलेट र क्याल्शियम कार्बोनेट सामान्यतया अपचको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ किनभने उनीहरूको एसिड घटाउने प्रभावहरूको कारण।
पेपसीड (फ्लोटिडिन) र जान्टाक (रान्टिडाइन) जस्तो H2 ब्लकरहरूसँग तुलना गर्दा, टम्सले छिटो काम गर्दछ र छोटो अवधिको लागि लक्षणहरूलाई कम गर्दछ। अल्का-सेल्टजर (सोडियम बाइकार्बोनेट) र मालोक्स (एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड / म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड) जस्ता अन्य एन्ट्यासीडहरूसँग तुलना गर्दा, टम्ससँग कार्यको अलि ढिलो शुरुआत छ, तर यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन्छ।
के खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन को लागी प्रयोग गर्ने
पेप्टो-बिस्मोल अन्य प्रयोगहरूको लागि अधिक प्रभावकारी हुन्छ जस्तै झाडापखालाको उपचार गर्ने र एच pylori संक्रमण। बिस्मथ सबसिलिसलेटलाई मद्दतको लागि देखाइएको छ पेप्टिक अल्सरलाई निको पार्नुहोस् ब्याक्टेरियासँग लड्दा, विशेष गरी जब एन्टिबायोटिकहरूसँग मिट्रोनिडाजोल र क्लेरिथ्रोमाइसिनको रूपमा।
कहिले काँही ईर्ष्या र अपचको लागि उत्तम उपचार विकल्पको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। ईन्डबर्नको अधिक गम्भीर घटनाहरू, जस्तै एसिड रिफ्लक्स रोग वा जीईआरडी, लाई अन्य औषधीहरू जस्तै प्रोटोन पम्प इनहिबिटरहरू (पीपीआई) आवश्यक पर्दछ। पीपीआईको रूपमा लेबल गरिएको ड्रग्स समावेश गर्दछ Prevacid (lansoprazole) र Prilosec (omeprazole) ।
सम्बन्धित: अल्का-सेल्टजर विवरणहरू
टम्समा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
टम्स मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र पेप्टो-बिस्मोल बनाम टम्सको लागत तुलना
मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले प्राय: ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) पेप्सो-बिस्मोल र टम्स जस्ता औषधीहरूलाई कभर गर्दछन्। जहाँ ओटीसी औषधिको प्रिस्क्रिप्शन संस्करण उपलब्ध छ, बीमा योजनाहरूले यसलाई कभर गर्ने निर्णय लिन सक्दछ।
पेप्टो-बिस्मोल र टम्सको औसत लागतहरू कुन फार्मेसीमा जानको आधारमा भिन्न हुन्छ। यद्यपि यी औषधिहरू सस्तोमा सस्तो छन्। अझै पनि, तपाइँ सिंगलकेयर पेप्टो-बिस्मोल कूपन वा सिंगलकेयर टम्स कूपनको साथ अधिक डाट्न सक्नुहुन्छ यदि डाक्टरले सिफारिस गरेमा।
मानक खुराक २ २2२ मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू हरेक to० देखि minutes० मिनेटमा आवश्यकता अनुसार २ देखि 500०० मिलीग्राम वा 5050० मिलीग्राम ट्याब्लेट आवश्यकता अनुसार
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे N / A N / A
एकलकेयर लागत + + + + + +
Pepto-Bismol vs Tums को सामान्य साइड इफेक्ट
पेप्टो-बिस्मोलले अक्सर मल वा जिब्रोको गाढा र color्ग निम्त्याउन सक्छ। यो किनभने बिस्मथ सबसिलिसलेटले सल्फरको सानो मात्रासँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छ बिस्मथ सल्फाइड, कालो पदार्थ सिर्जना गर्न। जबकि कालो मल मलक्कै मलको साथ भ्रमित हुन सक्छ (एक गम्भीर अवस्था), यो साइड इफेक्ट अस्थायी र हानिरहित हो। केही व्यक्तिले पेप्टो-बिस्मोल लिइसकेपछि हल्का कब्जाहरू पनि रिपोर्ट गर्छन्।
टम्सको साइड इफेक्टमा बेल्चिंग र ग्यास (पेट फूलना) समावेश छ। टम्सको कारण कब्ज र सुख्खा मुख पनि हुन सक्छ।
पेप्टो-बिस्मोलको दुर्लभ तर गम्भीर प्रभावहरूले टिनिटस वा कानमा लगातार घण्टी लगाउँदछ जुन सुन्ने समस्यालाई संकेत गर्न सक्छ। टम्सका अन्य गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा उच्च क्याल्शियम स्तरको लक्षणहरू समावेश छन् ( hypercalcemia ), जस्तै कमजोरी, हड्डी दुखाइ, र थकान।
कालो वा गाढा मल हो * हैन *
कालो वा अँध्यारो जिब्रो हो * हैन *
Belching र पेट फूलना हैन * हो *
सुख्खा मुख हैन * हो *
*रिपोर्ट गरिएको छैन
स्रोत: NIH ( पेप्टो-बिस्मोल ), NIH ( टम्स )
पेप्टो-बिस्मोल बनाम टम्सको ड्रग अन्तरक्रिया
पेप्टो-बिस्मोलले समान औषधीहरू जुन एस्पिरिनले अन्तर्क्रिया गर्दछ धेरै सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ। बिस्मथ सबसिलिसलेटले वारफेरिनसँग अन्तर्क्रिया गर्न र रक्तस्रावको खतरा बढाउन सक्छ। जब प्रोफेनेसिड जस्ता एन्टि-गाउट एजेन्टहरूसँग लिइन्छ, बिस्मथ सबसिलिसलेटले एन्टि-गाउट प्रभावहरू कम गर्न सक्छ। पेप्टो-बिस्मोलले टेट्रासाइक्लिन र क्विनोलोन एन्टिबायोटिकको शोषण र प्रभावकारिता पनि कम गर्न सक्छ।
गम्भीर खोकी र भीड को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि
टम्सले टेट्रासाइक्लिन र क्विनोलोन एन्टिबायोटिकको प्रभाव घटाउन सक्छ। क्याल्सियम क्यासनले एन्टिफon्गलसँग पनि बाँध्न सक्छ, जस्तै इट्राकोनाजोल, र तिनीहरूको शोषण र प्रभावकारिता कम गर्दछ। केही एन्टिबायोटिकहरू, एन्टिफंगल एजेन्टहरू, र फलामका पूरकहरू कमसेकम दुई घण्टा पहिले वा पछि क्याल्सियम कार्बोनेट लिनबाट बच्नुपर्दछ।
औषधि औषधि वर्ग पेप्टो-बिस्मोल टम्स
Levofloxacin एन्टिबायोटिक हो हो
केटोकोनाजोल एन्टिफंगलहरू हैन हो
वारफेरिन एन्टिकोआगुलेन्टहरू हो हैन
प्रोबेनेसिड एन्टिगट हो हैन
फेरीक साइट्रेट फलाम हैन हो
Pepto-Bismol र Tums को चेतावनी
जो एस्पिरिन उत्पादनहरू प्रति संवेदनशील छन् उनीहरूले पेप्टो-बिस्मोल र अन्य सालिसिलेट ड्रग्स लिनबाट अलग रहनु पर्छ। अन्यथा, अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू, जस्तै र्यासहरू, एक सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव हो।
१२ वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा पेप्टो-बिस्मोलबाट बच्न सकिन्छ। बच्चाहरू जो चिकनप्याक्स वा इन्फ्लूएन्जाबाट पुन: प्राप्ति गर्दै छन् तिनीहरूको जोखिम बढेको छ रेयको सिन्ड्रोम बिस्मथ सबसिलिसलेट लिइसकेपछि। धेरै दुर्लभ मामिलाहरूमा, पेप््टो-बिस्मोलले न्युरोटोक्सिसिटी निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी एड्स हुनेहरूमा। न्यूरोटोक्सिसिटीका लक्षणहरू र लक्षणहरूमा कम्पन्, कन्फ्युजन, वा दौरा पर्न सक्छ।
टम्समा क्याल्शियम कार्बोनेट समावेश भएकोले यसलाई टाढा वा अनुगमन गरिनु पर्छ अन्य क्याल्सियम युक्त उत्पादहरूको साथ। गम्भीर अवस्थाहरूमा, धेरै क्याल्सियमले मिर्गौलालाई हानी गर्दछ, हड्डीहरूलाई कमजोर गर्दछ, र मस्तिष्क र मुटुको कार्यहरूमा असर गर्दछ।
पेप्टो-बिस्मोल वा टम्स लिने क्रममा सावधान हुनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सल्लाह लिनुहोस्।
पेप्टो-बिस्मोल बनाम टम्सको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
पेप्टो-बिस्मोल भनेको के हो?
Pepto-Bismol एक over-the-counter औषधी हो जसले बिस्मथ सबसिलिसलेट समावेश गर्दछ। यो हल्का, असामान्य ईर्ष्या, अपच, र पखालाको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। बिस्मथ सबसिलिसलेटलाई उपचारको लागि पनि अनुमोदन गरिएको छ एच pylori संक्रमण जब अन्य एन्टिबायोटिकको साथ प्रयोग गर्दछ। Pepto-Bismol मौखिक निलम्बन, मौखिक ट्याब्लेट, र मौखिक chewable ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ।
टम्स भनेको के हो?
टम्स क्याल्शियम कार्बोनेटको लागि ब्रान्ड हो। यो कहिलेकाँही ईर्ष्या र अपचको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। टम्स नियमित-शक्ति र अतिरिक्त-शक्ति चेवाबल ट्याब्लेटहरूमा उपलब्ध छन्।
के Pepto-Bismol र Tums समान हुनुहुन्छ?
पेप्टो-बिस्मोल र टम्स एकै होइनन्। तिनीहरूले फरक सक्रिय तत्वहरू समावेश गर्दछन् र विभिन्न योगनहरूमा आउँदछन्। यद्यपि, पेप्टो-बिस्मोलको केही संस्करणहरूमा क्याल्शियम कार्बोनेट हुन सक्छ, टम्समा समान सक्रिय संघटक। यो खरीद गर्न अघि ड्रगको लेबल जाँच गर्नुहोस् तपाईले खोजिरहनु भएको सामग्री समावेश छ।
के पेप्टो-बिस्मोल वा टम्स राम्रो छ?
पेप््टो-बिस्मोल र टम्स दुबै ईर्ष्या वा अपचको कहिलेकाँही लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रभावकारी औषधि हुन्। तिनीहरू दुबै तुलनात्मक रूपमा छिटो काम गर्छन् र छोटो अवधिको लागि काम गर्दछन्। चिनी सामग्री र निस्क्रिय अवयवहरूमा निर्भर गर्दै अर्कोमा एक लाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ, साथ साथै यो तरल वा चेवाबल ट्याब्लेटमा आउँछ पनि। लागत पनि उत्तम विकल्प निर्धारण गर्न एक भूमिका खेल्न सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा पेप्टो-बिस्मोल वा टम्स प्रयोग गर्न सक्छु?
पेप्टो-बिस्मोल सामान्यतया गर्भवती महिलाहरूको लागि सिफारिस गरिदैन किनभने सम्भवतः रक्तस्रावको सम्भावित बढेको जोखिमको कारणले। टमहरू कहिलेकाँही सिफारिश गरिएको खुराकमा अपचको लागि लिन सकिन्छ। जे होस्, गर्भवती महिलाहरूका लागि सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ क्याल्सियम सेवन किनकि तिनीहरूले अन्य प्रसवपूर्व भिटामिन वा पूरक लिइरहेका हुन सक्छन्। यदि तपाईं अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट चिकित्सा सल्लाह लिनुहोस् ईर्ष्या गर्भावस्था वा अपच ।
म Pepto-Bismol वा Tums म रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
पेप्टो-बिस्मोल वा टम्स लिने बेलामा मदिरा लिनबाट जोगिनु पर्छ। रक्सी हुन सक्छ पेटको लाईयरिंगलाई चर्को पार्नुहोस् वा आन्द्रा र एन्ट्यासीड्स र एन्टिडाइरियल एजन्टको समग्र प्रभावशीलता परिवर्तन गर्नुहोस्।
के टम्स अस्वस्थ पेटको लागि राम्रो छ?
टम्स एक अप्ठ्यारो पेट को उपचार को लागी एक सस्तो, प्रभावी विकल्प हो। चेवेबल टम्स ट्याब्लेटले पाँच मिनेटमा काम गर्न सुरू गर्दछ र आवश्यक अनुसार लिन सकिन्छ। टमहरू केवल हल्का, कहिले काँही ईर्ष्या र अपचको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंलाई १ums दिन भन्दा बढि लगातार टम्स प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सल्लाह लिनुहोस्।
के पेप्टो बिस्मोल एन्ट्यासिड हो?
Pepto-Bismol को हल्का एन्ट्यासिड प्रभाव छ ईर्ष्या र अपच को लक्षणहरु लाई राहत गर्न मद्दत गर्न। यसले एन्टिडाइरियल एजेन्टको रूपमा पनि काम गर्दछ जुन सामान्यतया यात्रीको पखालाको उपचार गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। Pepto-Bismol ले तरल पदार्थ र इलेक्ट्रोलाइट नोक्सानी रोक्नको लागि पाचन पथको अस्तर कोटिंग गरेर कार्य गर्दछ।
फेब्रुअरी देखि सबै भन्दा राम्रो एकलकेयर समीक्षा हेर्नुहोस्
के यो मेरो घरपालुवा जनावरसँग औषधि बाँड्न सुरक्षित छ?
कति छिटो योजना बी गोली काम गर्दछ
के तपाइँ आफ्नो हातमा जन्म नियन्त्रण प्रत्यारोपण देख्न सक्नुहुन्छ
wellbutrin औषधि परीक्षण मा देखाउँछ
के तपाइँ zyrtec र benadryl सँगै लिन सक्नुहुन्छ
भरिएको नाक र खोकी को लागी के लिने